Sidee loo xukumaa liiska hantida Amazon?
Waqtiga aan ku shaqeynayo SEO, waxaan badanaa ogaanayaa in ganacsatada internetka ay u muuqdaan inay ganacsigooda ku dhisi doonaan Google. Si kastaba ha noqotee, ma aha mashiinka raadinta ugu weyn ee alaabada. Waa wax macquul ah in alaabooyinka tafaariiqda ah ee Amazon sida ku cad xogta tirakoobka, in ka badan 65% isticmaalayaasha waxay tixraacaan raadinta Amazon si ay u helaan badeecada ay u baahan yihiin. Waxaa lagu sharxi karaa faa'iidooyin badan oo Amazon ah sida karti ay u barbar dhigi karaan qiimaha iyo xulashada midka ugu wanaagsan; xidhiidhka ganacsatada; Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan waa in dadka isticmaala ay arki karaan dhammaan macluumaadka ku saabsan badeecada hal bog.
Waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeyaa Amazon iyo Google search platforms sababtoo ah ujeedooyinka kala duwan ee goobahan. Google ayaa loogu talagalay inay iibiso xayeysiisyada. Maalmahan, Google Adwords waa il lagama maarmaanka ah ee Google. Waqtigeeda, Amazon waxaa loogu talagalay in lagu iibiyo alaabta. Wuxuu abuuraa farqiga udub dhexaadka ah sida tallaabooyinka kasta oo lagu guuleysto.
Google waxay siisaa dadka isticmaala jawaabaha degdega ah ee su'aalahooda. Inkasta oo Amazon uu ku guuleysto markaad hesho alaab aad u baahan tahay qiimaha ugu macquulsan suuqa. Amazon waxay faa'iido ka heshaa heshiis kasta. Taasina waa sababta ay u siiso dadka isticmaala natiijooyinka ugu wanaagsan. Amazon wuxuu cabiraa dakhliga ama faa'idada guud ee raadinta kasta.
Marka wax laga beddelayo Google, waxaad ka dhigi kartaa turjubaan ku saabsan horumarinta ka qayb qaadashada isticmaalka iyo dhisidda arrimaha arrimaha dibadda. Marka aad ku hagaajinayso liiskaaga ku yaal Amazon, waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto hagaajinta heerka qiimaha. Isbedelka sare wuxuu la mid yahay dakhliga sare ee Amazon. Waxaad u baahan tahay inaad ku adkaato liiska liiska rikoorka Amazon si kor loogu qaado iibkaaga iyo inaad soo jiidatid macaamiisha aad u badan.
Aan ka falanqayno sida Amazon natiijada bogga u shaqeyso. Macluumaadkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad dhisato ololeyaal lagu kalsoon yahay oo ku yaal Amazon.
Amazon natiijada bogga
Amazon natiijooyinka raadinta raadinta waxay yeelan kartaa muuqaalyo kala duwan iyadoo ku xiran nooca su'aalaha su'aalaha ee sanduuqa raadinta. Amazon SERP waxay leedahay laba bandhig - liistada liiska raadinta ee qaybaha oo idil iyo aragtida albaabka markaad raadisid qaybo gaar ah.
Qodobada ugu muhiimsan ee liiska liiska liiska liiska Amazon waa badeecadaha xaddidan ee dhinaca bidixda bidix. Filtarrooyinkani waxay u adeegaan inay cirib tiraan natiijooyinka raadinta waxayna siiyaan dadka isticmaala alaabta ugu habboon. Waa sabab asaasi ah sababta ay muhiim u tahay inaad buuxiso goobaha ugu badan ee suurtogalka ah marka aad abuurayso bogga wax soo saarka ee Amazon.
Diirad gaar ah waa in la bixiyaa natiijooyinka la kafaalo-qaadey ee lagu dhejiyay bogga natiijada raadinta. Amazon ayaa bixisa xayeysiiska riixa waxay u adeegtaa isku midka ah Google. Waxaad u baahan tahay inaad iska bixiso qof kasta oo isticmaalkiisa gujinaya cinwaankaaga.
Dhamaan qodobada saameynta leh waxay u qeybsamaan qodobada waxqabadka iyo qodobbada ku lug leh.
Waxyaalaha waxqabadka waxay u adeegaan si loo hagaajiyo jaantusyada iyagoo muujinaya Amazon in ay heli karto faa'ido badan marka la eego sheyga sare ee bogga natiijada raadinta.
Cunsuriyadaha udhaxeeya waxay u adeegaan si ay u muujiyaan Amazon in sheyga uu ku habboon yahay weydiinta su'aalaha.
Cilaaqaadka waxqabadka waxaa ka mid ah qiyaasta celinta, tayada muuqaalka, iyo siyaasadda sicirka.
Cilaaqaadyada mudnaanta leh waxaa ka mid ah astaanta iyo sharaxaadinta odhaahda, branding, hindisada rasaasta iyo raadinta shuruudaha raadinta Source .